८५ प्रतिशत बीमा पोलिसी डिजिटल्ली माग हुन थाल्यो, अब १०० प्रतिशत पुर्याउँछौं- पोषक राज पौडेल – BikashNews
८५ प्रतिशत बीमा पोलिसी डिजिटल्ली माग हुन थाल्यो, अब १०० प्रतिशत पुर्याउँछौं- पोषक राज पौडेल
२०७८ भदौ २० गते १४:०७ विकासन्युज
सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नियामक निकाय बीमा समितिबाट बीमा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरु गरेको ४ वर्ष पुग्दैछ । छाेटाे अवधिमा कम्पनीले उच्चदरकाे ग्राेथ हासिल गरिरहेकाे छ । वित्तिय सामर्थ्यका आधारमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्य राखेर साधारण सेयर निष्काशनकाे तयारी थालेकाे छ । यो ४ वर्षमा कम्पनीले के के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन, अबको योजना के हो ? लगायतका विषयमा केन्द्रित भई कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) पोषकराज पौडेलसँग कुराकानी गरिएको छ ।
सिटिजन्स लाइफ सञ्चालनमा आएको ४ वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा कति उपलब्धि भए ?
यो चार वर्षको अवधिमा हामीले केही क्षेत्रमा सोचेको भन्दा पनि बढी गर्यौं । हामीले हालसम्ममा ७ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्न सफल भएका छौं । कूल ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । हामीले हाल १३० भन्दा बढी शाखाहरु स्थापना गरिसकेका छौं । ३३ हजार बढी एजेन्सी छन् । समग्र रुपमा हेर्दा ‘वी आर भेरी इन गुड सिच्योएसन’ । अघिल्लो वर्षको भन्दा पछिल्लो वर्षको मार्केट तथा भोल्युम ग्रोथ हेर्दा हामी बीमा क्षेत्रकै लिडिङ्ग पोजिसनमा छौं । नयाँ जेनरेसनका कम्पनी त छँदै छन्, पुराना केही कम्पनीभन्दा पनि अगाडि पुगेका छौं । नयाँ बिजनेसमा लिड गर्न सफल भएकोमा हामी खुशी छौं । हाम्रा सेवाहरूलाई राम्रोसँग डिजिटाइजेशन गर्ने, सर्भिसलाई एक्स्सिलेन्ट बनाउने लगायत इन्टरनल स्ट्रेन्थेन (आन्तरिक सुदृढीकरण) मा धेरै मिहेनत गरेका छाैं ।
तर, हामीले केही क्षेत्रमा सोचेको जति पनि गर्न सकेनौं । एक्स्पान्सन, भिजिबिलिटी, फेस टु फेस सर्भिसिङ्ग जस्ता कस्टुमर टच पोइन्टमा दिने सर्भिसहरुमा भने सोचेको भन्दा ग्याप भए । र, हामीले सोचेको जस्तो लेभलमा लान सकेनौं । सोचेको लेभलमा पुग्न नसक्नुको कारण एउटै थियो, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस । उक्त माहामारी नआएको भए अझै बढी गर्न सक्थौं भन्ने भएको छ । तर, त्यसलाई डिजिटल्ली सप्लिमेन्ट गरेको भएर पनि हामी अहिले सन्तोषजनक अवस्थामा नै छौं ।
लिडिङ् पोजिसनकाे एचिभमेन्ट गेन गर्नको लागि सामान्यतः केले बढी काम गर्ने रहेछ ?
हामीले विशेष गरी तीनवटा क्षेत्रमा फोकस गरेका छौं । तीनवटा मध्ये हामीले अहिले दुई वटामा लिड गरिसकेका छौं । एउटा, ग्राहकको लागि उनीहरुले चाहेको अर्थात नीड बेस्ड प्रडक्ट बनाउने । प्रडक्टमा एक्सिलेन्सी तथा यूनिक भ्यालु क्रियट गर्नेमा हाम्रो फोकस छ ।
यससँगै प्रडक्ट डिट्रिब्युसन गर्ने हाम्रो एजेन्सी टीमलाई तीनवटा एरियामा फोकस गर्यौं । एउटा, एजेन्टकाे फाइनान्सियल बेटरमेन्टको लागि काम गर्यौं, दोश्रो उनीहरुको ज्ञान तथा क्षमताको विकास र अर्को पुरस्कार र सम्मान, जसले उनीहरुको सोसियल स्ट्याटस अपलिफ्ट गर्नलाई हामी सफल भयाैं । त्यसले नै हाम्रो सिटिजन्स लाइफलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्यो । हामीले जसरी एजेन्सीलाई फ्रेमिङ्ग गर्यौं, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरायौं, त्यो नै हाम्रो सफलताको प्रमुख उपकरण हुन् । र, सिटिजन्स लाइफ आज यहाँ आउनुको पछाडि कम्पनीले एजेन्सीलाई जसरी अगाडि बढाएको छ त्यो नै ‘वान एण्ड वन्ली की टुल’ हो ।
अर्को, हाम्रो पोलीसी बेच्ने नै एजेन्सीहरु हुन् । जसलाई हामी सिटिजन्स लिडर भन्छौं । उनीहरुलाई यहाँ काम गर्ने वातावरण बनायौं । अहिलेसम्म अधिकांश कम्पनीमा लिडरहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनेमा केही ग्यापहरु देखिएका छन् । बजारमा पनि केही ग्याप छ । र, उक्त ग्यापलाई हटाउने अर्थात फुलफिल गर्नेमा सिटिजन्स लाइफले लिड गरेको छ ।
हामीले हालै मात्र तीन दिने तालिम दियौं । र, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा हामी बजारको भन्दा एक स्टेप माथि नै छौं । यससँगै सिटिजन्स लाइफमा काम गर्ने ट्रष्ट छ है भन्नेमा विश्वास कमायौं । जुन, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
तपाईंका १३० वटा शाखामध्ये कति वटाले नाफा कमाई रहेका छन् ? औषतमा प्रत्येक शाखाको कारोबार कति छ ?
एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो । बजारले बुझ्नुपर्ने के हो भने जीवन बीमा कम्पनीमा शाखाले नाफा गर्छ कि गर्दैन र कुन कुन शाखा नाफामा गएको छ भनेर हेर्ने अभ्यास अझै पनि छैन । धेरैले यसमा गृहकार्य गरेको पनि देखिदैन ।
तर, हाम्रो हरेक शाखा प्रमुख तथा जुनसुकै शाखामा पस्नुस् र उनीहरुलाई नाफामा हुनुहुन्छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुस्, उनीहरुले उत्तर दिने गरी हामीले क्यापेबल बनाएका छौं । यसको मतलब मेरो शाखा नाफामा जान कति बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई सबै थाहा छ । त्यो लेभलमा हामीले ज्ञानको विकास गरेका छौं ।
र, हाम्रा थुप्रै शाखाहरु अझै पनि नाफामा छैनन् । विशेष गरी ग्रामीण भेगका शाखाहरु नाफामा आउन केही समय लाग्छ । गाउँका सबै शाखाहरु केही समय नाफामा नआउन पनि सक्छन् । सबैमा नाफा हेरेर मात्रै जाँदैनौं, केही ठाउँमा सेवा दिनकै लागि गएका हुन्छौं । र, केही ठाउँमा कम्पनीको रणनीतिको हिसावले शाखा खोलेका छौं ।
हामी नयाँ कम्पनी भएकाले पनि धेरै शाखाहरु नयाँ छन् । गत वर्ष खोलिएका शाखा यही वर्ष नाफामा आउने अथवा औसतमा २/३ वर्ष लाग्ने शाखाहरु पनि गाउँमा हुन्छन् ।
तपाईंहरु नयाँ कम्पनी पनि हुनुभयो । बजारलाई लक्षित गरेर शाखाहरु विस्तार गर्नुभयो । ती शाखाले काम गर्न नसकेर उल्टो नोेक्सानमा गएर शाखा बन्द गरिदिनु पर्यो भन्ने स्थिति आयो कि छैन ?
छैन । आजसम्म आएको छैन । हामीले शाखा नोक्सानमै गयो अब बन्द गरिदिउ भन्ने सोचेका छैनौं । तर अन्य रणनीतिहरु अपनाएर सञ्चालन गराउनु पर्छ भन्ने भयो र कोरोनाकै कारणले पनि धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन गरायो । मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने, अस्पतालको सेवा सुविधा लिनको लागि पनि उनीहरु लेकबाट बेसी झर्न बाध्य भएको हामीले पाएका छौं । त्यसैले यसले दीर्घकालिनको लागि पनि राम्रै प्रभाव पार्छ भन्ने विश्वास छ ।
तपाईंले अहिलेसम्म गर्न चाहेकाे तर गर्न सकिन भन्ने केही रह्यो ?
मैले शुरुमै भनिसके । कोरोनाले गर्दा हामीले जे सोचेका थियौं, केही थप बढी गर्न सक्छौं भन्ने थियो, त्यसमा केही बाँकी रहे । हाम्रा स्ट्रयाटेजीलाई मुभमेन्ट गराउन जति समय लाग्थ्यो, जुन स्पीडमा गरिन्थ्यो, माहामारीले गर्दा उक्त स्पीड रोकियो । तर, अहिले अवस्थामा पनि हामीले करिब १८० प्रतिशतको ग्रोथ गर्यौं । उक्त ग्रोथ र समग्र कम्पनीको परफरमेन्स हेर्दा हामी सेफ छौं । र, सबै सूचक हेर्दा सन्तुष्ट हुने अवस्था छ ।
अबको प्लान ?
हामीले यो वर्ष विशेष गरी डिजिटलाईजेशनलाई थप फोकस गर्ने हो । त्यसको लागि ‘डिजिटल सिटिजन्स क्याम्पेन’लाई अघि बढाउँदै छौं । आजको दिनमा ग्राहकहरुले घरमै बसेर सिटिजन्सको पोलिसी खरिद गर्न सक्नेछन् र, उनीहरुको घरसम्मै पोलिसी पुर्याउने लेभलसम्मको काम सिटिजन्सले गरेको छ ।
साथै, अनलाइनबाटै दावी गरेको केही दिनभित्रै भुक्तानी गर्न सफल भएका छौं । हालै मात्रै बिमितको मृत्यु भएको दुई दिनमै उसका परिवारलाई भुक्तानी गरेका थियौं ।
अबको संसार डिजिटल हो । महामारीको कुन वेभ आउँछ कसैलाई थाहा छैन । घरम बस्दा पनि इन्स्योरेन्सको प्रडक्ट चाहिन्छ भने उनीहरुले एप्लाई गर्न सक्ने छन् । समग्रमा सिटिजन्स लाइफ डिजिटलाइजेशनमा एक स्टेप फड्को मार्ने गरी अघि बढ्छ ।
हालको अवस्था कस्तो छ ? ग्राहकले अनलाईनबाट कत्तिको एप्लाई गरिरहेका छन् ?
गत असारमा आएका पोलिसीमध्ये ८० प्रतिशत पोलिसी डिजिटल्ली आयो । त्यस्तै, गत साउनमा बढेर ८५ प्रतिशत पोलिसी डिजिटल्ली मात्रै आयो । जसलाई हामी १०० प्रतिशत गर्न चाहान्छौं ।
यसमा एजेन्टको भूमिका कति रहन्छ ?
पुरै एजेन्टकै भूमिका हो । किनभने सबै एजेन्टले नै बेच्ने हो । हाम्रो ड्रिष्टिब्युटर नै एजेन्ट हो ।
डिजिटल्ली कारोबारमा गइसकेपछि पनि एजेन्टको भूमिका रहन्छ र ?
यो टेक्निकल प्रडक्ट भएकोले ग्राहकलाई कुन प्रडक्टमा के बेनिफिट हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । तर, अभिकर्तालाई भने हामीले तालिम दिएका हुन्छौं । कुनमा कति सुविधा पाइन्छ, लाभ कसरी लिने भन्ने अभिकर्तालाई सबै थाहा हुन्छ । र, बल्ल हामीले उसलाई प्रडक्ट बेच्नको लागि टुल दिन्छौं ।
जस्तै, कुनै दुर्गम गाउँमा बसेको एउटा अभिकर्ताले आफ्नो गाउँ ठाउँको ग्राहकलाई त्यहिबाट सब्मिट गर्छ । र, विकसित मुलुकमा पनि ग्राहकले आफै जानेर बुझेर बीमा पोलिसी किनेको धेरै कम छ । किनभने यो कसैको मार्फत नै लिनुपर्छ ।
सिटिजन्ससँगै अन्य थुप्रै जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आए । त्यसमध्ये अधिकांशले प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गरिसके । तर, तपाईंको अहिलेसम्म आएको छैन । यसमा तपाईंहरु किन पछि पर्नुभयो ?
हामी अहिले आईपीओ ल्याउने तयारी अवस्थामै छौं । र, अरुभन्दा पछि पर्नुको कारण हामीले केही गृहकार्य गरिरहेका छौं । हामी हाम्रो टाइम प्लान अनुसार चलिरहेका छौं । कोही अघि कोही पछि त भइहालिन्छ । तर, हामी हाम्रो रोडम्याप अनुसार पछि परेका छैनौं । हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार नै गइरहेका छौं ।
अब कहिले आउँछ ?
हामी तयारीको लगभग अन्तिम अन्तिम अवस्थामा छौं । हामी सकेसम्म चाँडै गर्छौं । हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार हामी एकदम रेडि पोजिसनमा छौं । हामी छिट्टै साधारणसभामा जाँदैछाैं । त्यसपछि नियामकको स्वीकृतिको लागि लगभग ३/४ महिना समय लाग्ला । अब त्यहाँ पनि कत्तिको लाम (क्यु) छ भन्नेमा पनि भरपर्छ । अब अहिले धितोपत्र बोर्डमा पनि केही अलमल भइरहेको छ । त्यसैले त्यहाँ कत्तिको क्यु छ भन्नेले पनि हाम्रो समय निर्धारण गर्छ ।
सिटिजन्सले प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्काशन गर्दैछ, हाेइन ?
हामीले नियम अनुसार के–के गर्न मिल्छ र कम्पनीलाई जे गर्दा राम्रो हुन्छ, हामी त्यो गर्ने हो । हामीले पोलिसी होल्डरको बेनिफिटको लागि र कम्पनीलाई बलियो बनाउनको लागि काम गर्ने हो । र, कम्पनीलाई जे गर्दा राम्रो हुन्छ, हामी त्यहि अनुसार अघि बढ्ने हो । अहिले यत्ति मात्रै भने ।
तपाईले जे भन्नुभयो त्यो सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो छ, जुन मार्केटले एप्रिसियट पनि गर्छ तर, आजको कम्पनीको वित्तीय विवरणले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न कत्तिको सर्पोट गर्छ ?
मज्जाले सर्पोट गर्छ ।
प्रिमियम कतिसम्म जान सक्छ ?
यस्तो छ । हामी अहिले फाइनल नम्बरसम्म पुगिसकेका छैनौं । हामी एउटा रिजिनियबल्ली र अहिलेको भन्दा राम्रै भ्यालुमा आउँछ भन्ने हिसाबले नम्बर चाहिँ त्यो पोइन्टमा पुगेपछि निर्धारण गर्छौं । अहिले त्यो गरिसकेका छैनौं । फेरी पनि हामीले सबै काम नियम अनुसार गर्नुपर्छ । नियामककाे स्वीकृति लिनुपर्छ । नियम अनुसार मिल्ने भयो र कम्पनीलाई राम्रो हुन्छ भने प्रिमियमै ल्याउँछौं । त्यसको लागि बजारमा रहेको सबै अप्सनहरुमा काम भइरहेको छ ।
तपाईं नयाँ कम्पनीमा पहिलो सीईओ । सीईओकाे जिम्मेवारी पहिलो पटक सम्हाल्दै गर्दाको जोश, जाँगर मर्दै गएका छन् कि थप इनरजेटिक भएँ, पुरै खारिएँ, जोश जाँगर थपिएको अनुभूति हुन्छ ?
पक्कै पनि । शुरुमा सीईओ हुँदा दुई तीनवटा कुरा थियो । नयाँ सीईओ भएर आउँदा मलाई राम्रो पक्ष के थियो भने नयाँ कम्पनी ड्राइभ गर्न पाएँ । नयाँ सिर्जना गर्न पाउँदाको जुन चुनौति थियो, त्यो राइट डिरेक्सनमा लानको लागि र पुरै नयाँ सिर्जना गर्नको लागि आफ्नो इच्छा अनुसारले लान पाएँ । जसले गर्दा आज चौथो वर्षसम्म राइट स्थानमा पुग्न सफल भयौं । र, आगामी दिनमा थप राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा थप कन्फिडेन्स बढेको छ । शुरुको र आजको अवस्थासम्मको जिम्मेवारीले ममा म्याच्युरिटी थपिएको छ । यसमा म थप खारिएको छु । त्यसैले यो मेरो लागि राम्रो अवस्था हो ।
एशियन लाईफले ल्यायो २४ वर्षे योजना, प्रिमियम शुरुको १२ वर्षसम्म मात्र तिरे पुग्ने
सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ग्लोबल आईएमई बैंकको भन्दा कम
बजेटमा असहयोग गर्ने नीति नरहेको एमालेको धारणा, अर्थमन्त्री भन्छन्ः मिलेर काम गर्छौं